200 Gawaarida gawaarida la dhigto oo loo yaqaan Altınordu | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka BanaadirCiidamada 52200 Gawaarida Baarkinka Altınordu
25 / 03 / 2020 Ciidamada 52, GUUD, Gobolka Banaadir, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
baarkinka gawaarida ee altinorduya
Dawladda Hoose ee Magaalada Ordu, Gudoomiyaha baarkinka, taas oo noqotay baahi aad u weyn gobolka oo dhan. Iyadoo la raacayo tilmaamaha Mehmet Hilmi Güler, wuxuu sii wadaa inuu soo saaro xalka joogtada ah, ee maaha maxaliga.
Si xal loogu helo baahiyaha baarkinada magaalada, Dowlada Hoose ee Magaalada, oo billowday ka shaqeynta aaga woqooyiga garoonka 19-ka Sebtembar, ayaa ballaarisay goobta gawaarida la dhigto waxayna ku yaboohday baarkinka qiyaastii 200 gawaari adeegga shacabka.
“WAA IN AY DIYAARIN KARTAAN MAGAALADA”
Coşkun Alp, Xoghayaha Guud ee Dawladda Hoose ee Magaalada Ordu, oo baaray shaqooyinka goobta ka dhacay ayaa yidhi, “Waxaa jiray dhibaatooyin xagga baarkinka magaaladeenna ah. Sababtaas awgeed, waxaan bilownay inaan ka shaqeyno dhul 2 500 mitir murabac ah oo ka dambeeya garoonka meesha ugu horeysa. Aaggan, oo sidoo kale ku daatay shidaalka, wuxuu ahaa tallaabo loo qaaday xallinta baahida loo qabo baarkinka. Aaggan, oo ugu yaraan 200 oo gawaarida lagu dhigan karo oo ay weheliso baarkinka jira, ayaa gargaar ka bixin doona magaalada dhexdeeda. Sidan, waxaan sii wadi doonnaa inaan kordhinno shaqadeena. Waxaan u mahadcelineynaa asxaabteena kooxda ee gacan ka gaysatay waxaan rajeyneynaa in maalgashiyadeena ay faa iido u yeelan doonaan magaaladeena. ”
Baaxadda mashruucan dhexdeeda, waxaa jira ku dhawaad ​​4 gawaarida baarkinka gawaarida la dhigto iyo nalalka gawaarida la dhigto oo ku yaal 847 200 mitir murabac, goob baabuurta la dhigto, hagaajinta dhismaha naadiga, daabacaad la taaban karo oo dabaq ah iyo 4.610 mitir murabac laba jibbaaran shaqada dhulka.
310 Parking Lot ee Isbitaalka Gobolka Kocaeli